Fandraisan'anjaran'i RASOLONDRAIBE Marcel - Wikipedia
Pour RASOLONDRAIBE Marcel dinika Laogim-panakanana fampidiram-pejy laogy laogiim-panararaotana
6 Novambra 2019 à 17:47 Fampitahana tant. +5 973‎ V Fidelis Rakotonarivo ‎ Pejy voaforona amin'ny « == Fototra ara-pianakaviana == RAKOTONARIVO Fidelis no anarany feno, teraka tamin’ny 28 Aogositra 1956 tao AMBOHIMAHAZO – MANANDRIANA. Zanak’i Ra-François sy… » Marika: Hanova araka ny hitan'ny maso
4 Jiona 2019 à 17:19 Fampitahana tant. +6 172‎ V Dinika amin'ny fanoroana:Ahoana ny manao takelaka ‎ →‎TRINITE MASINA : fizarana vaovao ankehitriny
9 Febroary 2019 à 03:52 Fampitahana tant. +18‎ Dinika amin'ny Wikipedia:Tranonkala Pôetawebs ‎
9 Febroary 2019 à 03:49 Fampitahana tant. +17 018‎ V Dinika amin'ny Wikipedia:Tranonkala Pôetawebs ‎ →‎Vanim-potoana Karemy : fizarana vaovao
16 Desambra 2018 à 07:26 Fampitahana tant. +12 756‎ V Sinoda momba ny tanora ‎ Pejy voaforona amin'ny « ==AKON’NY SINODAN’NY TANORA : FEHINKEVITRA FARANY== Notontosaina tao Roma ny Sinodan’ny Eveka ho an’ny Tanora, ny 3 hatramin’ny 28 Okitobira 2018 lasa teo.... » ankehitriny
16 Desambra 2018 à 07:04 Fampitahana tant. +6 392‎ V Vanimpotoana Fiavian'ny Tompo (katolika) ‎ Pejy voaforona amin'ny « == Famaritana:== Ny hoe « Fiaviana » dia dikanteny malagasy nandikana ny frantsay hoe « Avent », izay mifototra amin’ny latinina « Adventus » izay fahatongava... »
Hita tao amin'ny "https://mg.wikipedia.org/wiki/Manokana:Fandraisan%27anjara/RASOLONDRAIBE_Marcel"